Utshintsho lwe-odolo: apha ngasentla yayikukuKhanya, ngezantsi apha buBomi obuzakhela kwiifom ezahlukeneyo malunga neziko.
Iziko bubomi kwaye embindini likhanya, kwaye ngaphakathi, malunga, kwaye ngalo lonke uhlobo lwendlela iqhubeka ubomi.
IIMGAQO ezinkulu zelizwe le-noumenal zezi: ukwazi, ukushukuma, ubukho, nomoya. Izinto eziphambili okanye iinkqubo ekuthi imigaqo-nkqubo yehlabathi ye-noumenal ibonakaliswe ngayo kwilizwe elibonisiweyo, yile: ubomi, uhlobo, isini kunye nomnqweno. Ukufunyanwa kwezi zinto okanye iinkqubo ngokubonakaliswa kwehlabathi, zizinto: ukucinga, ubuntu, umphefumlo, kunye nentando. Imigaqo, izinto, kunye nokufikelela, ekugqibeleni zisonjululwe kwaye zibe zezokwazi. Izifundo ze-noumenal zehlabathi zijongwe kancinci. Into yokuqala yehlabathi eliyinene iphambi kwethu: isihloko sobomi. Kukulu ke ukwazi ukuba yintoni kwihlabathi le-noumenal. Ukuqonda kungumbono wayo yonke into enokufikelelwa; ngobukho bayo zonke izinto zikhokelwa ngamaphondo kunye neemeko ukuya kufikelela kuzo.
Ubomi kukuqala kwale nkqubo; imvakalelo kunye nemizamo yokuqala; inkqubela phambili ebonakalayo kwilizwe eliqaqambileyo. Ubomi yinkqubo yokuba; kuphela kwendlela, ayisosiphelo. Ubomi kwihlabathi eliyinkuthalo ayisiyiyo yonke; Inye kuphela yentshukumo-intshukumo yecentrifugal-apho indalo yenzeka khona ukuba iguqulwe yaba ziimo njengoko iphefumlelweyo iphuma kwinto engenanto.
Ubomi lulwandle olunamandla ahamba phezu kwalo u-Great Breath, obangela ukuba uvele kwiinkqubo zalo ezingazinzanga nezingabonakaliyo zobunzulu behlabathi kunye nomhlaba. Ezi ziqhutywa kumda wobomi obungabonakaliyo kwifom ebonakalayo. Kodwa ixeshana elincinci, umjelo wamanzi uyajika, kwaye konke kuthwalwa kubuyiselwe kokungabonakali. Ke kumagama obomi angabonakaliyo imihlaba iyaqengqeleka kwaye itsaliwe kwakhona. Kukho imisinga emininzi yolwandle lobomi; umhlaba wethu nazo zonke izinto zihlala kuwo. Esikwaziyo ngobomi kuphela kokudlula kwifom ebonakalayo, ekutshintsheni kweendlela zayo, ukusuka kwinto engabonakaliyo nokungabonakaliyo.
Ubomi bubalulekile, kodwa bucoceke ngakumbi kunezinto ezaziwayo kangangokuba zingenakubalwa ngemicimbi ye-physicist. Inzululwazi sisilumko sobukrelekrele bale mihla; kodwa inzululwazi yokuthanda izinto iya kufa ebuntwaneni bayo, ukuba ayikhuli ngaphaya komgangatho wehlabathi eliphantsi. Iphupha le-physicist kukubonisa ukuba ubomi abusosiphumo kunobangela. Wayeza kuvelisa ubomi apho ubomi babungekho; ukulawula ukusebenza kwayo ngemithetho ethile; kwenze ngengqondo. ke uyichithe, ungashiyi mkhondo wokuphinda ubekho, nokuba ubonakalisile ubukrelekrele. Kukho abo bakholelwa ukuba ubomi banokuveliswa apho bungekho khona; ukuze ubonakalise ubukrelekrele; obo bulumko bunokuchithwa ngonaphakade. Kodwa ayiyi kucingelwa ukuba loo nto inokuyiqonda inkqubo yobomi ngelixa besala ukukholwa okanye ukuqikelela ubukho bayo ngaphandle kwendlela. Ezinye zeempawu ezibonakaliswa bubomi ziyaxatyiswa, kodwa abo babanga ukuba banako ukuvelisa ubomi kwizinto ezingena "inert" zisakude kude nesisombululo sengxaki njengoko bezinjalo ekuqaleni. Ukuvelisa ubomi kwizinto ezingena nto kunokubangela ukuba kufumaneke ukuba akukho nto "ingenisiweyo", kuba akukho bomi bunokuveliswa apho ubomi bungekhoyo. Iimpawu zokubonakaliswa kobomi zinokuba zingenasiphelo, kodwa ubomi bukhona ngazo zonke iindlela. Ukuba ubomi bebengekho ngamabona munye, umcimbi awunakutshintsha ngohlobo.
Isazi sebhayoloji asinakuyifumana imvelaphi yobomi kuba ukukhangela kwayo kuqala kwaye kuphele ngelixa ubomi buhamba kwihlabathi le fomu. Uyala ukujonga ubomi ngaphambi kokuba bubonakale, okanye abulandele emva kwengqikelelo yakhe emva kokuba ishiye ubume bayo. Ubomi yile arhente engaqondakaliyo ebonakala ngokubonakala kwifom, kodwa ubomi yinto esivela kuyo sakha isimo: yiyo ke le intshukumo yamanyala obomi kwisahlulo kunye nokwakhiwa ngokutsha kweefom. Ubomi ngumgaqo wokukhula kunye nokwanda kwezinto zonke.
Umhlaba wethu ufana nethambeka kunye nesiponji kwindawo yolwandle yobomi. Siphila kulusu lwesi siponji. Sasiqhutywa kule ndawo ngamaza kumaza olwandle oluza kubakho kwaye emva kwethuba, kwi-ebb, sishiya i-wave kwaye sidlula, kodwa siselwandle lobomi. Njengoko indalo kunye nomhlaba wayo uhleli kwilwandlekazi lobomi bayo, xa ke ingqondo ngokuphefumla ingena emzimbeni xa izalwa, nganye ingene kulwandle lwayo lobomi.
Kwisakhiwo sobomi bomzimba ibaleka ngaphakathi kwaye yakhiwe ngokwendlela eyilwe ngayo, kunye nezixhobo zengqondo ziyaphuhliswa. Ingqondo ehlala kulo mzimba ingene ebomini. Ubomi bomsulwa obutsha obugqitha kumzimba wengqondo bufakwe yiminqweno yengqondo. Ekuqaleni ingqondo iphendula kulonwabo lweemvakalelo zobomi. Ubumnandi sisigaba esinye sokuziva kobomi, esinye isigaba saso sobuhlungu. Ingqondo iyagcoba ngolonwabo xa usiva imvakalelo yobomi emzimbeni. Umzamo wokwandisa imvakalelo yolonwabo uphumela kumava entlungu xa, uphelile amandla, amalungu engqondo awasenako ukuphendula kulungelelwano lwangoku lobomi. Kwilizwe elibonisiweyo ukugcwala kobomi kucinga, kwaye ukucinga kuyabutshintsha ubomi bangoku.
Siphila kulwandle lobomi, kodwa ukuqhubela phambili kwethu kuhamba kancinci, kuba sazi kuphela ubomi njengoko zivuselela iimvakalelo. Ingqondo iyonwaba ngelixa iimvakalelo zisenzeka kwaye zizaliseka ngokudlula kobomi; kodwa xa, kwinqanaba lokuphuhliswa kwengqondo, iimvakalelo zifikelela kumda wokungabonakali komzimba ukhukulisiwe yimisinga yobomi, ngaphandle kokuba ingqondo iyazikhulula ekunyanzeni kwayo ngokwasemzimbeni ukuze iveze iimvakalelo zangaphakathi. Ezi ke ziya kuyinyusa ukuphuma kumjelo wayo omanzi ukuya kwimithombo yobomi ephezulu. Ke ingqondo ayikhukuliswa yimikhosi enqamlezileyo yokulibala, okanye yokuxhuzula ematyeni okukhohlisa kwaye uthukile, kodwa ithwelwe phezulu kwizambatho zayo ukuya kumjelo wobomi okhanyayo, apho ifunda kwaye ibambe ngokuzinzileyo kwaye iyakwazi ukuyihambisa Ikhosi ngokukhuselekileyo kuyo yonke imijikelezo yobomi.
Ubomi abunakuhamba. Obu bomi boluvo buhlala kodwa lixesha elincinci. Ukufikelela kwiimvakalelo ingqondo iya kubambelela kuzo zonke iintlobo zobomi; kodwa ukuba iimvakalelo zivelisiwe kwaye zivuthwe kubomi beli lizwe baya zisuka. Iifom ezinokuma ngengqondo zibambe ziphela zisekhona ngelixa zibanjiwe.
Ingqondo ifuna amava ebomini ekungena kuwo ukuze ifunde ukukhangela kunye nokujonga ubunzulu bayo. Xa ingqondo ikwazi ukukhangela ubunzulu kwaye ibambelele kwikhondo layo eliyinyani ngokuchasene nayo yonke imisinga ephikisayo into yobomi iyenziwa. Ingqondo iyavuseleleka kwaye ivuseleleka ngakunye kwezijikelezayo ezichasayo njengoko izoyisa. Iyakwazi ukusebenzisa yonke imijikelezo yobomi ngokulungileyo endaweni yokuba iphambuke kwindlela yayo kwaye yoyiswe ngabo.
Into esiyiqikelela ngoku okanye esiyaziyo, kuphela kobomi befom eguqukayo. Into esifanele sizame ukuyazi kwaye siphile ngayo bubomi banaphakade, ukufikelela okukhulu kukokwazi.